ကုမ္ပဏီသတင်း |
QD3900H1 Flated bed Document ကင်မရာ
QPC20F1 USB စာရွက်စာတမ်းကင်မရာ
QPC80H2 Gooseneck စာရွက်စာတမ်းအမြင်အာရုံ
Qomo QD5000 4K Desktop Document Camera
Qomo ပရိသတ်တုံ့ပြန်မှုစနစ် PPT ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
စာမေးပွဲနှင့်စာမေးပွဲများအတွက် Qomo ကျောင်းသားတုံ့ပြန်မှုစနစ်နှင့် Classroom Clicker
စကားပြောအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အတူ QRF997 တုံ့ပြန်မှုစနစ်
QWB300-Z အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော whiteboard
QIT600F3 capacitive ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
မိုက်ခရိုဖုန်းဖြင့် Qomo QWC-004 webcam HD
Qomo ကျောင်းသား ကီးပတ်များ အဘယ်ကြောင့် စာသင်ခန်းအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်းများ ဖြစ်သနည်း။
admin မှ 22-05-13 ရက်နေ့တွင်
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာအသစ်များသည် အဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လျက်ရှိပြီး သင်ကြားမှုပုံစံသည် အသိပညာတစ်ခုတည်းမှ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော လေ့ကျင့်ရေးဆီသို့၊ ဆရာများ၏ ဟောပြောခြင်းမှ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆီသို့ အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိပါသည်။စာသင်ခန်း...
Qomo သည် Las Vegas ရှိ Infocomm Fair ကို တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
Here is the news to share with you that we are going to attend the Infocomm Fair this year in Las Vegas. Both No.: W2661. Welcome you to visit our booth. If you weren’t planning on attending but are interested, you are welcome to use our free exhibitor. Kindly contact odm@qomo.com for VIP code. ...
Qomo Flow Works လိုလားသော ပညာရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ အသားပေးဖော်ပြချက်
22-05-07 တွင် admin မှ
Qomo Flow အလုပ်လုပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲသည် Qomo မှ ဖန်တီးထားသော ပညာရေးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းတွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပညာရေးအရင်းအမြစ်များပါရှိသည်။အလင်းတန်း၊ ကင်မရာ၊ အုပ်များ၊ အချိန်တိုင်းကိရိယာ နှင့် စခရင်မှတ်တမ်း ကဲ့သို့သော ဆရာနှင့်ရင်းနှီးသော ကိရိယာများသည် သင့်ပရိသတ်ကို ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် သင်တန်းပို့ချသူများအတွက် ပြည့်စုံသော ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခု ပေးပါသည်။ဆန္ဒကို အသုံးချနိုင်ပါတယ်...
Qomo၊ အီလက်ထရွန်းနစ် whiteboard ပေးသွင်းသူများ
Qomo သည် 2002 ခုနှစ်ကတည်းက USA တွင် ရုံးချုပ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဌာနခွဲရုံးများနှင့်အတူ စမတ်ပညာရေးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများကို ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။အီလက်ထရွန်းနစ် whiteboard သည် Qomo China ၏ အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Qomo အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော whiteboard ကို QWB300-Z interactive whiteboard သို့ ပိုမိုပါးလွှာသော frame နှင့် mo...
ကျောင်းသား ကီးပတ် ၂၀၀ နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် Qomo မော်ဒယ် QRF999 ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
admin မှ 22-04-29 ရက်နေ့တွင်
အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုစနစ်သည် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး စကားပြောသူတစ်ဦးအား မေးခွန်းများအတွက် တုံ့ပြန်မှုများကို စုဆောင်းပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် စကားပြောသူနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်စေခြင်းဖြင့် စကားပြောသူနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်စေပါသည်။Qomo သည် မော်ဒယ် QRF999 စကားပြောမှတ်သားမှု တုံ့ပြန်မှုစနစ်နှင့် အလုပ်မုဒ်အသစ်အတွက် နည်းလမ်းအသစ်ကို လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။
အလုပ်သမားနေ့ အားလပ်ရက် အသိပေးချက်
admin မှ 22-04-21 ရက်နေ့တွင်
Here isanotice about the coming International Labor Day Holiday. We are going to have the holiday from 30th, April to 4th, May. If you have inquiry about the interactive panels, document camera, response system. Please feel free to contact whatsapp: 0086 18259280118 And email: odm@qomo.com &nb...
စမတ်စာရွက်စာတမ်းကင်မရာ Qomo QPC80H2 ဝယ်ပါ။
admin မှ 22-04-15 ရက်နေ့တွင်
ပုံများကို ရိုက်ကူးပြီး Qomo QPC80H2 စာရွက်စာတမ်းကင်မရာဖြင့် မာလ်တီမီဒီယာသင်ခန်းစာများကို ဖန်တီးပါ။Qomo QPC80H2 စာရွက်စာတမ်းကင်မရာဖြင့် တကယ့်အရာဝတ္ထုများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါ။သဘောတရားများသည် စိတ္တဇ သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်း လက်တွေ့ပြသရန်၊ စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့် နားလည်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေတယ်...
အီလက်ထရွန်းနစ် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော မဲပေးခြင်းခလုတ်များ
ဖတ်ရသလောက် လွယ်သလောက် -2 သို့မဟုတ် -3 မရှိပါ။ဆန္ဒမဲပေးသူများသည် မဲပေးရန်အတွက် ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံသာ လိုအပ်သည်။ကလစ်ဖြင့်မဲပေးခြင်းသည် ရိုးရှင်းပြီး လက်၊ အသံ သို့မဟုတ် စာရွက်မဲပေးခြင်းနည်းလမ်းများကဲ့သို့ပင် လေ့ကျင့်မှုမလိုအပ်ဘဲ၊ စုစုပေါင်းရေတွက်ခြင်းနှင့် အမြဲတမ်းမှတ်တမ်းဖြင့် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါ။အေဖ...
Qomo Voting ကီးပတ်များကို အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ်သနည်း။
22-04-08 တွင် admin မှ
ပုံမှန်အားဖြင့် ကောင်းစွာစီစဉ်ထားသော အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုမှတစ်ဆင့် ပရိသတ်ပါဝင်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအစည်းအဝေးများကို ဖန်တီးပြီး ပေးပို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါသည်။ပွဲဦးတည်ချက်များနှင့် အောင်မြင်မှုကို မည်ကဲ့သို့ တိုင်းတာမည်ကို သိရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါသည်။အဲဒီကနေ စံပြနည်းပညာကို ဖော်ထုတ်ရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်...
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော whiteboard ဖြန့်ဖြူးသူကို ရှာဖွေနေပါသည်။
admin မှ 22-03-31 ရက်နေ့တွင်
2002 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော whiteboard၊ ပရိသတ်တုံ့ပြန်မှုစနစ်နှင့် အခြားများစွာသော လက်လီရောင်းချသူနှင့် လက်လီရောင်းချသူအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ၎င်းတို့၏ ပရီမီယံအရည်အသွေးနှင့် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများကြောင့် ဝယ်လိုအားမြင့်မားပါသည်။ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်ကိုက်သေချာစေရန် ...
USB ဝဘ်ကင်မရာ Qomo
admin မှ 22-03-25 ရက်နေ့တွင်
ဤသည်မှာ သင့်အားကိုးကားရန်အတွက် Qomo QWC-004 USB ဝဘ်ကင်မရာအင်္ဂါရပ်အချို့ဖြစ်သည်။မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အွန်လိုင်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်များ၊ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်များနှင့် ဖောက်ထွက်သည့်အစည်းအဝေးများတွင် သင် ဆက်သွယ်ကြပါစို့။ဤ webcam သည် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ကွန်ဖရင့်ခေါ်ဆိုမှုအတွက် 30 fps တွင် full HD 1080p ဗီဒီယိုကို ဖမ်းယူသည်...
Qomo Interactive Classroom ဖြေရှင်းချက်
admin မှ 22-03-12 ရက်နေ့တွင်
ရိုးရှင်းသော လက်ချောင်းလေးဖြင့် သင်ခန်းစာများကို အသက်ဝင်စေပါသည်။Touch Board သည် ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်၊ စာကြောင်းများရေးရန်နှင့် ပုံများဆွဲရန် နည်းလမ်းများစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဘောပင်နှင့်လက်-လက်ဖြင့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော whiteboard တစ်ခုဖြစ်သည်။Resolution မြင့်မားသော နည်းပညာသည် တိကျပြတ်သားသော တိကျမှုကို ပေးစွမ်းသည်...
ကျွန်ုပ်တို့ကို Follow လုပ်ပါ။